स्थायी राजनैतिक समाधान म गर्छु, भाजपामा त्यो क्षमता छैन-ममता व्यानर्जी - खबरम्यागजिन
Homeखबरस्थायी राजनैतिक समाधान म गर्छु, भाजपामा त्यो क्षमता छैन-ममता व्यानर्जी
December 15, 2020 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि खबर 0
जलपाइगढी आइपुगेकी मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले स्थायी राजनैतिक समाधान गर्ने घोषणा गरेकी छन्। भाजपासित कटाक्ष गर्ने क्रममा उनले विमल गुरुङले भाजपाको असली चरित्र बुझेको भन्दै सम्पूर्ण दार्जिलिङका वासिन्दाप्रति आभार प्रकट गरिन्। ‘भाजपाले गोर्खाल्याण्ड दिन्छु भनेर कति पल्ट झुट बोल्यो?,’ उनले भनिन्, ‘भोट जितेर अहिलेसम्म कतिवटा गोर्खाल्याण्ड बनियो? मैले त भोट जितेको होइन। म त्यहाँबाट हारेको हुँ। किन भने मैले गोर्खाल्याण्ड दिन्छु भनिनँ।’
व्यानर्जीले भाजपाले यही झुट बोलेकोले नै विमल गुरुङले भाजपा छोडेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘भाजपाले स्थायी राजनैतिक समाधान गर्न सक्तैन, यो म नै पूरा गरेर देखाउनेछु।’
विमल गुरुङ अनि विनय तामाङ दुवैले आआफ्नो जनसभाबाट ममता व्यानर्जीले यसअघि दुइपल्ट पहाडको स्थायी राजनैतिक समाधान गर्छु भनेर दिएको बचन पूरा गरिदिने अपिल गर्दै आइरहेका छन्। ममता व्यानर्जी आफैले गोर्खाल्याण्ड दिन्छु नभनेकोले दार्जिलिङमा जहिल्यै हार्नुपरेको भन्दै यसपल्ट भने स्थायी राजनैतिक समाधान गर्ने बताइन्।
ममता व्यानर्जी गोर्खाल्याण्डको कट्टर विरोधी हुन्। उनले निरन्तर ‘म मर्छु तर बङ्गाल विभाजन गर्न दिन्न’ भन्दै आइरहेकी छन्। गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गर्नेहरूलाई युएपिएको मुद्दा लगाएकी छन्। 13 जना आन्दोलनकारीलाई गोली ठोकेकी छन्। धेरैलाई भूमिगत बनाएकी छन्। उनी गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन सहन गर्न सक्तैनन्।
व्यानर्जीले अब फेरि जिटिएजस्तै बङ्गाल अधिनस्त कुनै अर्को व्यवस्था स्थायी राजनैतिक समाधानको नाममा गठन गर्ने सङ्केत दिएकी छन्।
यता राजनैतिक आलोचक बीपी बजगाईँले ममताले समाधान गर्छु भनेको स्थायी राजनैतिक समाधानको मोडल सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन्।
हिजो पनि उनले एउटा अन्तरवार्तामा यही कुरा दोहोऱ्याएका छन्। भाजपाले दिन्छु भनेको स्थायी राजनैतिक समाधान गोर्खाल्याण्ड हो होइन अझसम्म स्पष्ट छैन। यता तृणमूल सरकारले पनि स्थायी राजनैतिक समाधान नै गर्छु भनेकी छन्।
भाजपाले पनि स्थायी राजनैतिक समाधान नै गर्ने अनि तृणमूल काङ्ग्रेसले पनि स्थायी राजनैतिक समाधान नै गर्ने बताइरहेको भए पनि त्यो समाधान गोर्खाहरूको सपना छुट्टै राज्य हो होइन अहिले नै स्पष्ट छैन।
पहाड, तराई र डुवर्सको मात्र नभएर गोर्खाहरूको माग छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड नै हो। तर भाजपा र तृणमूल दुवैले सोझै गोर्खाल्याण्ड राज्य नभनेर स्थायी राजनैतिक समाधान भनिरहेका छन्। के दुवैले बङ्गाल अधिनस्त कुनै व्यवस्थाको कुरा गरिरहेका हुन्?
अब विमल गुरुङ अनि विनय तामाङ दुवैले जनतालाई स्थायी राजनैतिक समाधानबारे बताउनुपर्ने माग उठ्न सक्ने सम्भावना दखापरेको छ।